HomeKnowledgeမှေးကငျးစ ကလေးလေးတှေ အိပျနရေငျးပွုံးရတဲ့ အကွောငျးအရငျး
မှေးကငျးစ ကလေးတှနေဲ့ လသားအရှယျ ကလေးတှကေ အိပျနရေငျးနဲ့ ပွုံးနတေတျပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ အပွုံးက အရမျးကို ခဈြစရာ ကောငျးပါတယျ။ အပွဈကငျးစငျပွီး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ အပွုံးကို မိဘတှကေလညျး အရမျးသဘောကြ ကွပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ကလေးတှကေ အိပျနရေငျး ပွုံးရတဲ့ အကွောငျးရငျးကို love media ကနေ ဖျောပွပေးသှားပါမယျနျော။
ကလေးတှကေ မမှေးခငျကတညျးက ပွုံးတတျကွပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျ မိခငျပေါငျး ၅၀၀ ကြျောကို 4D ultrasound ရိုကျတဲ့အခါ ၃၁ ပတျအရှယျ ကလေးလေးတှကေ ပွုံးနတော တှရေ့ပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ ပွုံးခြိနျက ပမျြးမြှ ၃. ၂၁ စက်ကနျ့ ကွာပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ကလေးတှကေို မမှေးခငျအမရေဲ့ ဗိုကျထဲမှာကတညျးက ပွုံးတတျကွောငျး တှရေ့ပါတယျ။
ပညာရှငျတှကေ ဆကျလကျ လလေ့ာကွညျ့တဲ့အခါ ကလေးတှကေ တဈခါတလေ ဗိုကျထဲမှာ ၁၈ ပတျ အရှယျကတညျးက ပွုံးတတျနပေါပွီ။ ဗိုကျထဲမှာ ၂၆ ပတျဆိုရငျ ကိုယျဟနျအမူအရာလုပျတာ၊ ပွုံးတာ၊ မကျြတောငျခတျတာ၊ ငိုတာတောငျ လုပျတတျနပေါပွီ။
ကလေးတှေ ဗိုကျထဲမှာနတေုနျး ပွုံးတာကို အမှတျတမဲ့ ပွုမူတဲ့ အပွုအမူလို့ ယူဆကွပါတယျ။ ကလေးတှကေ ဗိုကျထဲမှာ ကနျသလို ပွုံးတာကလညျး တမငျမရညျရှယျဘဲ ဖွဈသှားတဲ့ အပွုအမူပါ။
မှေးကငျးစ ကလေးတှကေ အိပျလိုကျနိုးလိုကျ ဖွဈတတျသလို နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျလညျး အိပျပြျောတတျပါတယျ။
REM လိူ့ချေါတဲ့အဆငျ့မှာ အိပျပြျောပွီး မိနဈ ၆၀ ကနေ ၉၀ အတှငျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အိပျစကျမှု စကျဝနျးမှာ REM ဖွဈလိုကျ၊ နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျ အိပျပြျောလိုကျပါပဲ။ အဲဒါကွောငျ့ ကလေးတှကေ REM အဆငျ့မှာ ပွုံးတတျသလို ခွတှေေ လကျတှလေညျး ကနျပါတယျ။
မှေးကငျးစ ကလေးတှကေ စကားမပွောတတျ သေးတာကွောငျ့ ငိုတာနဲ့ ပွုံးတာက သူတို့ရဲ့ ဆကျသှယျမှု စနဈပါ။
ကလေးတှရေဲ့ စိတျထဲ ပြျောလာရငျ၊ မှေးတဲ့ အနံ့လေးရလာရငျ၊ သာယာတဲ့ အသံလေး ကွားရငျ၊ နူးညံ့တဲ့ အထိအတှရေ့ရငျ ပွုံးလာပါတယျ။
မှေးကငျးစ ကလေးတှကေ အိပျမကျ မမကျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူတို့မှာ မှတျဉာဏျ ရှိပါတယျ။
ကလေးတှေ အိပျနတေုနျး ပွုံးတာက အိပျမကျထဲမှာ ပြျောလို့ ပွုံးတာမဟုတျပါဘူး။ မှေးကငျးစ ကလေးတှကေ မှတျမိဖို့၊ စိတျကူးယဉျဖို့အတှကျ အရမျးကို ငယျပါသေးတယျ။ မှေးကငျးစကလေး ပထမအပတျမှာ အိပျစကျတာက သူတို့ရဲ့ မှတျဉာဏျနဲ့ ဦးနှောကျလုပျငနျးတှေ တိုးတကျဖို့ ကူညီပေးပါတယျ။ ပွီးတော့ မှေးပွီးမကွာခငျမှာ ကလေးက မိဘနှဈပါးရဲ့ အသံကို မှတျမိပွီး ခှဲခွားတတျနပေါပွီ။
မွေးကင်းစ ကလေးလေးတွေ အိပ်နေရင်းပြုံးရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
မွေးကင်းစ ကလေးတွေနဲ့ လသားအရွယ် ကလေးတွေက အိပ်နေရင်းနဲ့ ပြုံးနေတတ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အပြုံးက အရမ်းကို ချစ်စရာ ကောင်းပါတယ်။ အပြစ်ကင်းစင်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံးကို မိဘတွေကလည်း အရမ်းသဘောကျ ကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကလေးတွေက အိပ်နေရင်း ပြုံးရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို love media ကနေ ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်နော်။
ကလေးတွေက မမွေးခင်ကတည်းက ပြုံးတတ်ကြပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ကို 4D ultrasound ရိုက်တဲ့အခါ ၃၁ ပတ်အရွယ် ကလေးလေးတွေက ပြုံးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပြုံးချိန်က ပျမ်းမျှ ၃. ၂၁ စက္ကန့် ကြာပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကလေးတွေကို မမွေးခင်အမေရဲ့ ဗိုက်ထဲမှာကတည်းက ပြုံးတတ်ကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ ပညာရှင်တွေက ဆက်လက် လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ ကလေးတွေက တစ်ခါတလေ ဗိုက်ထဲမှာ ၁၈ ပတ် အရွယ်ကတည်းက ပြုံးတတ်နေပါပြီ။ ဗိုက်ထဲမှာ ၂၆ ပတ်ဆိုရင် ကိုယ်ဟန်အမူအရာလုပ်တာ၊ ပြုံးတာ၊ မျက်တောင်ခတ်တာ၊ ငိုတာတောင် လုပ်တတ်နေပါပြီ။
ကလေးတွေ ဗိုက်ထဲမှာနေတုန်း ပြုံးတာကို အမှတ်တမဲ့ ပြုမူတဲ့ အပြုအမူလို့ ယူဆကြပါတယ်။ ကလေးတွေက ဗိုက်ထဲမှာ ကန်သလို ပြုံးတာကလည်း တမင်မရည်ရွယ်ဘဲ ဖြစ်သွားတဲ့ အပြုအမူပါ။
မွေးကင်းစ ကလေးတွေက အိပ်လိုက်နိုးလိုက် ဖြစ်တတ်သလို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်လည်း အိပ်ပျော်တတ်ပါတယ်။ REM လိူ့ခေါ်တဲ့အဆင့်မှာ အိပ်ပျော်ပြီး မိနစ် ၆၀ ကနေ ၉၀ အတွင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိပ်စက်မှု စက်ဝန်းမှာ REM ဖြစ်လိုက်၊ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်လိုက်ပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် ကလေးတွေက REM အဆင့်မှာ ပြုံးတတ်သလို ခြေတွေ လက်တွေလည်း ကန်ပါတယ်။
မွေးကင်းစ ကလေးတွေက စကားမပြောတတ် သေးတာကြောင့် ငိုတာနဲ့ ပြုံးတာက သူတို့ရဲ့ ဆက်သွယ်မှု စနစ်ပါ။ ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ထဲ ပျော်လာရင်၊ မွှေးတဲ့ အနံ့လေးရလာရင်၊ သာယာတဲ့ အသံလေး ကြားရင်၊ နူးညံ့တဲ့ အထိအတွေ့ရရင် ပြုံးလာပါတယ်။
မွေးကင်းစ ကလေးတွေက အိပ်မက် မမက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့မှာ မှတ်ဉာဏ် ရှိပါတယ်။ ကလေးတွေ အိပ်နေတုန်း ပြုံးတာက အိပ်မက်ထဲမှာ ပျော်လို့ ပြုံးတာမဟုတ်ပါဘူး။ မွေးကင်းစ ကလေးတွေက မှတ်မိဖို့၊ စိတ်ကူးယဉ်ဖို့အတွက် အရမ်းကို ငယ်ပါသေးတယ်။ မွေးကင်းစကလေး ပထမအပတ်မှာ အိပ်စက်တာက သူတို့ရဲ့ မှတ်ဉာဏ်နဲ့ ဦးနှောက်လုပ်ငန်းတွေ တိုးတက်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ မွေးပြီးမကြာခင်မှာ ကလေးက မိဘနှစ်ပါးရဲ့ အသံကို မှတ်မိပြီး ခွဲခြားတတ်နေပါပြီ။